पहिरो प्रभावितलाई तत्काल सहयोग हुन्छ: सभामुख सापकोटा « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2020 September 13, 2:41 pm
सिन्धुपाल्चोक २८ भदौः सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आज बाह्रबिसे नगरपालिका–७ घुमथाङको भीमखर्कमा र नाकबुच्चेमा गएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल सहयोग हुने जानकारी दिए ।उनले भौगोलिक अध्ययन गराएर यहाँको बस्ती सार्नु पर्ने-नपर्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरमै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “पीडित परिवारका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था हुन्छ नै”, सभामुख सापकोटाले भने ।
गए राति गएको पहिराले ११ घर क्षति भई नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बेपत्ता भएका छन् । तीनजना घाइतेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह्रबिसेमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी आज बिहान गएको पहिराले जुगल गाउँपालिका–४ चनौटेमा तीन घर पूर्ण रुपमा क्षति भई स्थानीय विमला पौडेल घाइते भएका छन् । त्यस्तै वडा नं १ सेलाङको देउरालीमा पहिराले सात घरका परिवार विस्थापित भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले जानकारी दिए ।
आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौँ: मन्त्री दुलाल
वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका–७, घुम्थाङ नागपुजेमा आएको पहिराबाट भएको क्षतिले आफू अत्यन्त दुःखित भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।-रासस
प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी स्वीकार गर्दिनँ भन्नुपर्छ : भीम रावल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा.
पब्जी हत्याकाण्ड : आमाको हत्यापछि पहिलो पटक छोरी बोलिन,‘कोठामा आमा छटपटाइरहेकी थिइन्’
एजेन्सी, २ असार । लखनउको पब्जी हत्याकाण्डकी १० वर्षीया निर्दोष छोरीले १२ दिनपछि मुख खोलेकी
कालिगण्डकी कोरिडोर पर्वत खण्डको काम सम्पन्न, भुक्तानी नपाएको ठेकेदारको गुनासो
काठमाडौं, २ असार । कालिगण्डकी कोरिडोरको पर्वत खण्डको अर्मादी–फलेवास सडकखण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ
आमासँग झगडा गरेर निस्किएका इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीको शव फेला
काठमाडौं, २ असार । थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका एक विद्यार्थीको शव भेटिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी
बैंक अफ काठमाडौं र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच मर्जर सम्झौता
काठमाडौं, २ असार । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौंबीच मर्जर सम्बन्धि सम्झौता भएको
“बजेट चुनावमुखी पनि छैन, वितरणमुखी पनि होइन”
काठमाडौं, २ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारको बजेटलाई चुनावमुखी र वितरणमुखी
संसद बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं, २ असार । बिहीबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने
एसपीपीको नक्कली मस्यौदा कस्ले फैलायो
काठमाडौं, २ असार । अमेरिकी सैन्य साझेदारीसम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको मस्यौदा भनिएको एउटा पत्र
आइसीसीआरका अध्यक्ष डा. सहस्रबुद्धे किन नेपाल आए
काठमाडौं, २ असार । भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई वार्षिक हजारौंको संख्यामा छात्रवृत्ति दिदै आएको छ ।